Hlola iRomania - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eRomania
Okufanele ukwenze eRomania
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeRomania
Bukela ividiyo ekhuluma ngeRomania
Hlola iRomania esogwini olusentshonalanga yoLwandle Olumnyama. Ijabulela ubuhle obukhulu bemvelo nokuhlukahluka kanye namagugu esiko acebile. IRomania ihlasela izivakashi ngezindawo ezinhle ezisezintabeni nasezindaweni zasemaphandleni ezingafakwanga ndawo, kanye namadolobha ayo omlando nedolobha layo elixakekile. Eminyakeni eyishumi edlule iRomania ibisenze intuthuko enkulu futhi ingelinye lamalungu asanda kuba khona e-European Union. Izivakashi ezivela emazweni asentshonalanga kungenzeka, nanamuhla, zijabulele okuhlangenwe nakho okumangazayo eRomania. Leli yizwe elikhulu kwesinye isikhathi elingathusa umahluko phakathi: amanye amadolobha angamaNtshonalanga Yurophu ngempela; ezinye amadolobhana kungabonakala sengathi zabuyiswa kusukela kudala. Izinto iRomania ezidume ngazo zifaka: i Izintaba zeCarrathian, umqambi wezithombe uConstantin Brancusi, iwayini, izimayini zikasawoti, uGeorge Enescu, izinqaba zephakathi, Eugene Ionesco, izimoto ze- “Dacia”, Dracula, amaqabunga eklabishi agxiliwe, amaNadia Comaneci, amahlathi aminyene obukhulu, uLwandle Olumnyama, iGheorghe Hagi, amasimu kajongilanga, izimpisi namabhere, izindlu zezindela ezipeyintiwe, iDanube Delta, njll.
Njengoba kunogu lolwandle olumnyama ngaseningizimu-empumalanga, igqitshwa yiBulgaria ngaseningizimu, iSerbia eningizimu-ntshonalanga, Hungary enyakatho-ntshonalanga, Moldova kuya empumalanga nase-Ukraine enyakatho nasempumalanga. Ngenkathi izifunda zayo eziseningizimu zivame ukubonwa njengengxenye yamazwe ase-Balkan aseNingizimu-mpumalanga, eTransylvania, isifunda sayo esimaphakathi nesikhulu kunazo zonke, sinokubukeka okungasentshonalanga-enkabeni yeYurophu.
Ezikhathini zasendulo insimu yanamuhla iRomania yayihlalwa ikakhulu yizizwe ezingama Dacian, ezazinamasiko amangalisayo, yize ayengaziwa kahle kakhulu. UMbuso WaseDacian wafinyelela umvuthwandaba wawo ngekhulu le-1st BC, lapho inkosi yabo iGreater Burebista ibusa isendaweni yayo yamandla ezintabeni zeCarpathian ngaphezulu kwendawo enkulu ukusuka e-Central Europe (eningizimu Germany) eSouthern Balkans (Ulwandle i-Aegean). Inethiwekhi emangazayo yezinqaba nezinqaba ezakhiwe ezungeze inhloko-dolobha yaseDacian iSarmizegetusa, eningizimu-ntshonalanga yanamuhla eTransylvania, ibilondolozwe kahle kuyo yonke iminyaka futhi manje seyaziwa njengengosi yamagugu omhlaba ye-UNESCO.
Izifunda kanye nemizi yaseRomania
Ukufika eRomania kulula kusuka cishe kuzo zonke izingxenye zomhlaba, ngenxa yesikhundla sawo, kanye neqiniso lokuthi kusetshenzelwa uhlu lwezinhlobo zezithuthi nezinkampani.
IRomania iyilungu lesiVumelwano seScgengen kodwa ayikakenzi ngokugcwele ngokuphelele. Kwizakhamuzi ze-EU ne-EFTA (i-Iceland, iLiechtenstein, Norway), kanye nalezo zaseSwitzerland, i-ID kamazisi evunyelwe ngokusemthethweni (noma ipasipoti) yanele ukungena. Akunakudingeka ukuthi badinge i-visa yokuhlala noma ubude. Abanye ngokujwayelekile bazodinga ipasipoti yokungena.
Ukuya / ukusuka kwelinye izwe (iScgengen noma cha) kusuka / ukuya eRomania kuzoholela ekuhlolweni okujwayelekile kokufuduka, kepha ukuya / kusuka kwelinye izwe lase-EU ngeke kudlule isiko. Kodwa-ke, uma iRomania ivame ukudinga i-visa yobuzwe bakho, lokhu kungasuswa uma usuvele unayo i-visa evumelekile ye-Schengen.
Buza kummeli wendawo noma inxusa laseRomania.
Uhlu lwama-visa seluvele luhambisana nalawo mazwe aseSchengen asebenzisa ngokugcwele isivumelwano.
I-Romania inezikhumulo zezindiza zakwa-17, lapho i-12 okwamanje isetshenziswa khona ngezindiza zomhlaba wonke ezihleliwe. Izikhumulo zezindiza eziphambili zamazwe onke yilezi:
Ukuhamba uzungeze iRomania kunzima futhi kungaphumeleli kumabanga amabanga amade okumbozwe kuleli. Ingqalasizinda yezokuthutha ibilokhu ithuthuka kakhulu muva nje, yize imigwaqo ihlala iyindawo ebuthaka. Kunemigwaqo eminingana eyakhiwa, kodwa ayikho esebenza ngokuphelele. Ukuhamba ngezitimela, nokho, kuthuthuke kakhulu. Kunemiklamo eminingana yokuvuselela etholakalayo yamathrekhi wesitimela amaningana futhi okwenza ithrafikhi kulezo zintambo ihambe kancane njengamanje.
I-Romania ine-network enkulu kakhulu yesitimela efinyelela cishe kuwo wonke amadolobhana kanye nenani elikhulu lamadolobhana. Yize okunye ukwenziwa kwesimanje kwenzeka le nethiwekhi ingekho esimeni esihle kakhulu, inejubane eliphansi kanye nokuvama okulinganiselwe kwesitimela emizileni eminingi. Noma kunjalo, izitimela zihlala ziyindlela engcono kakhulu yokuhamba ibanga elide.
Ukuhamba ngemoto noma umqeqeshi kuyindlela elula futhi enenqwaba, amaphesenti angaphezu kwama-60 ezivakashi zakwamanye amazwe asebenzisa le ndlela yokuhamba. Isondo lokushayela lingakwesobunxele kanti namalayisense okushayela aseYurophu aqashelwa ngamaphoyisa. KwabaseMelika, ipasipoti nelayisense elivumelekile lokushayela laseMelika lanele ekuqashisweni kwezimoto.
Uma ushayela imoto yakho, i-vignette yomgwaqo omkhulu (ebizwa nge- "Rovinieta") iyaphoqeleka hhayi kuphela ezindleleni zezimoto kodwa nakuyo yonke imigwaqo kazwelonke nayo. Ungayithenga ku-inthanethi noma emngceleni noma esiteshini segesi esiseduze. Akudingeki unamathele noma yini; i-vignette ihlolwe ngokuzenzakalelayo ngohlelo lwekhamera. Kubiza i- € 3 ngezinsuku ze-7. Ukushayela ngaphandle koyedwa kuzoletha inhlawulo enkulu.
Ukuqashwa kushibhile uma kuqhathaniswa nentshonalanga yeYurophu; Izinkampani ezinkulu zamazwe omhlaba manje sezishibhile kakhulu njengezindawo, kuya ngokuthi ukhetha yiphi insiza yomshuwalense (noma ucindezelwe ukuyithenga), kepha gwema abantu “abanobungane” abazimisele ukukuqashisela imoto yabo.
Amaphoyisa aseRomania anenqubomgomo yokungabekezeleli ukushayela okuphuzile - izilawuli zivame kakhulu - futhi ngokuyisisekelo noma iliphi inani lotshwala ezibalweni zakho zegazi njengokushayela udakiwe.
Ezimweni eziningi, ngemuva kwengozi kuphoqelekile ukuthi kuhlolwe igazi ukuthola ukuthi ngabe abashayeli bebephuzile yini utshwala. Ukwenqaba ukwenza lokhu kuhlolwa cishe ukukufaka ejele - isijeziso esivame ukwedlula lesi esokushayela udakiwe.
Ibhasi ingaba yindlela ebiza kakhulu ukuhamba phakathi kwamadolobhana. Emadolobheni amadolobhana aseRomania, ngokuvamile ungathola iziteshi zebhasi eyodwa noma eziningana (i-autogara). Ukusuka lapho, amabhasi namabhasi asuka emadolobheni nasemizana asendaweni eseduze nakwamanye amadolobha ezweni.
Amatekisi angabizi kakhulu eRomania. Kubiza cishe nge- € 40-Cent (1.4 - 2 leu / RON) km ngayinye noma kancane ngaphezulu, ngentengo efanayo yokuqalisa. Amanani aphansi kakhulu enza amatekisi abe yindlela edumile yokuhamba nababili bendawo nabahambi (kungabiza kancane kunokushayela owakho imoto) - ngakho-ke ngezikhathi zokujaha kungaba nzima ukuthola i-cab (yize IBucharest ukuba nezicucu ze-10000 cishe.
Ulimi olusemthethweni lwaseRomania yiRomania, i-limba română, okuyilimi lwesiRomance. Kwahlelwa ngokusemthethweni ngasekupheleni kwe-19th nasekuqaleni kwekhulu le-20th, ngokufaka okubalulekile okuvela eFrance.
Umuntu waseRomania ofundile kahle ophothule enyuvesi ephakathi nendawo uvame ukukhuluma kahle isiNgisi, futhi abe nolwazi oluyisisekelo lolunye ulimi lwase-Europe, njengaseFrance, isiJalimane, isiNtaliyane, iSpanish (mayelana ne-8%) noma isiRussia. Uma ushiya izindlela ezivamile zokuvakasha, isiRomania ukuphela kwendlela yokucela imininingwane. Lokho ngeke kube yinkinga enjalo; funda amagama ayisisekelo bese ubacela ukuba babhale izimpendulo.
I-Romania ingenye yamazwe akholwa kakhulu eYurophu, kanti isonto lama-Orthodox likhona ndawo zonke. Ngokuqinisekile uzofuna ukuvakashela amanye amasonto nezindela zezindela zazo ngobuhle nomlando wazo, kodwa kungani ungazinikezi ithuba lokuthola inqwaba yama-Orthodox? Ibandla livame ukuma futhi kujwayelekile impela ukuthi liboniswe isikhashana nje kuphela ngesikhathi senqwaba ukuze ufike nokuzijabulisa kwakho ngaphandle kokuphazamisa noma ngubani. Khombisa kunoma yiliphi isonto ngeSonto ekuseni, ume uthule ngemuva ubuke. Ugqoke kahle, bheka isigaba esithi “Hlonipha”. Uyacelwa uqaphele ukuthi ngenkathi iningi livulelekile kubo bonke futhi izivakashi zamukelwa kakhulu, umthendeleko (umthendeleko) uvame ukugcinelwa labo ababhaptiziweyo abangama-Orthodox (noma ngabe yiphi ihlelo). Imvamisa umpristi uzobuza kulabo abavakashile ukuthi ubhapathizwe yini ngaphambi kokuba enze i-Eucharist.
Uzozwa ukufundwa kwebhayibheli, imikhuleko nezinye izinkambiso ezihambisana nentshumayelo emfushane echaza umbhalo. Akunakwenzeka ukuthi uqonde okuningi, kepha ungabona amazinga ahlukahlukene wokuzibandakanya phakathi kwabantu abahamba isonto, abonakala ngokuthi abantu bahlala ngasikhathi esingakanani futhi lapho behlala khona, nokuthi bavame kangakanani ukuzisayina ngesiphambano, noma ngisho nokuzenzela. Ukucula kwebandla okuhleliwe akuyona into evamile kepha kuqhutshwa yikhwaya nomuntu ngamunye ohamba nesonto ejoyina lapho ezizwa enjena. Ukuhlabelela kwekwaya kungakhanga, ikhwalithi imvamisa ikhombisa ukubaluleka kwebandla.
I-altare inezigaba ezinezicabha ezivulekile nezisondele kuye ngenkathi yesonto. Uzobona namakhandlela edayiswa, ekhanyiswa ngaphakathi noma esontweni emigqonyeni ehlukene yemiphefumulo yabantu abafile noma abaphilayo. Zama ukuthola ukuthi ngamaholide akhethekile namasiko, mhlawumbe ukusatshalaliswa kwamanzi angcwele ngeloli lapho kubhabhadiswa uChrist (Boboteaza) noma izixuku zamakhisimusi ngoKhisimusi noma nge-Ista (i-Orthodox yase-Orthodox ingahle ivulwe isonto elilodwa uma iqhathaniswa neNtshonalanga). Imishado ivame ukwenziwa ngeMigqibelo, isiko linemibala egqamile futhi liyathakazelisa.
Uhlobo lwemali lukazwelonke lwaseRomania yi-leu (ubuningi lei), okuhunyushwa ngokwezwi nezwi, futhi lisho ibhubesi ngesiRomania. I-leu ihlukaniswe i-100 bani (ukuvinjelwa okukodwa).
IRomania ishibhile ngamanani aseNtshonalanga. Kodwa-ke, yaziswa ukuthi yize ungalindela ukuthi ukudla nokuhamba kungabizi kakhulu eRomania, ukuthenga imikhiqizo yokungenisa enjenge-amakha aseFrance, uhlobo lwaseMelika lwabaqeqeshi noma ikhompyutha yaseJapan kuyabiza njengakwezinye izingxenye ze-EU. Izingubo, amasudi woboya akhiqizwe eRomania, amahembe, amasokisi okotini, amabhodlela ewayinini amhlophe nabomvu, ushokoledi, usalami, uhla oluningi loshizi wasendaweni, amajakethi esikhumba angabizi noma amajazi abizayo futhi athambekele kungenzeka athenge izinto ezinhle kubantu bokufika.
Lapho ushintshana ngemali, kungcono kakhulu ukusebenzisa i-exchange Bureaus noma ukusebenzisa imishini yemali.
Ukuthengiselana kwaseRomania kwenzeka kaningi emalini. Yize ezinye izindawo zizokwamukela i-Euro noma i-USD ngokujwayelekile uzokhokhiswa i-20% eyengeziwe ekhokha ngale ndlela futhi ayiluleki, yize lokhu kuyashintsha. Indlela enhle ukukhokha usebenzisa imali yasendaweni - lei (RON). Iningi labantu baseRomania linamakhadi okukhokhisa noma ikhadi lesikweletu.
Amadolobha amaningi amancane anama-ATM okungenani noma amabili nehhovisi lasebhange, namadolobha amakhulu anamakhulu ama-ATM namahhovisi asebhange. (Akuyona into evamile ukubona ama-ejensi amathathu asebhange enye nenye eduze kwezindawo zokuhlala zabantu IBucharest). Ama-ATM ayatholakala emadolobhaneni amaningi (eposini noma ehhovisi lebhange lendawo). IsiRomania se-ATM yi-bancomat. Amakhadi wesikweletu amukelwa emadolobheni amakhulu, emahhotela amaningi, ezindaweni zokudlela, ezitolo ezinkulu, ezitolo ezinkulu.
Ungalindeli ukuthi iRomania ibe indawo eshibhile yokuhamba! Ukwehla kwamandla emali kuye kwahlasela iRomania ezindaweni eziningi, futhi amanye amanani aphakeme noma aphakeme kunalawo aseNtshonalanga Yurophu, kepha lokhu kuvame ukubekelwe izindawo zokunethezeka, indawo yokuhlala, ubuchwepheshe, futhi, ngezindawo zokudlela. Kodwa-ke, ukudla nokuhamba kuhlala kushibhile (kepha kubiza kakhulu kunakwamanye amazwe esifundeni), njengoba kwenza okujwayelekile, ikakhulukazi ezimakethe nangaphandle kwenhloko-dolobha. IBucharest, njengaseningi lamadolobha amakhulu emhlabeni, ibiza kakhulu kunanoma yikuphi enye indawo kuleli lizwe, ikakhulukazi enkabeni yedolobha. Eminyakeni edlule ye-2-3, iBucharest ishibhile kakhulu, futhi kulindeleke ukuthi ikwenze iminyaka eminingi ezayo. Kodwa-ke, abahambi abavela emazweni aseNordic bazothola ukuthi onke amanani entengo aseRomania aphansi ngokumangazayo, ikakhulukazi ezokuthutha (okufushane nokude), abadlela ezindaweni zokudlela, neziphuzo.
Ukuthi yini ongayidla nesiphuzile eRomania
Yize udlame olubhekiswe kubavakashi bakwamanye amazwe lunqabile, lokhu akusho ukuthi kufanele ushiye umqondo wakho ojwayelekile ekhaya, uma uthatha isinqumo sokuya eholidini eRomania. Imvamisa ubugebengu bukhawulelwa kokweba okuncane kanye nemikhonyovu ejwayelekile, kepha hhayi okunye okungathinta izivakashi. Gwema izindawo eziseduze zedolobha futhi akufanele uhlangane nezinkinga. Nomaphi lapho ungakhona ezweni ubuza abantu abangabethembayo ngendawo ezungezile, bayokujabulela ukukunikeza izikhombisi ezimbalwa.
Yize ubandlululo lobuhlanga lukhona eRomania, ikakhulukazi kulabo ababukeka njengamaRom (“gypsies” noma tigani), ubugebengu benzondo buyivelakancane.
Ukufeba akukho emthethweni njengoba kucelwa, yize kubahamba ngezitaladi ongase uhlangane nabo emaphethelweni edolobha noma ngaphakathi naseBucharest nakwamanye amadolobha amakhulu. Uyacelwa ukuthi ukwazi lokhu futhi ungamukeli noma yikuphi okunikezwayo okuvela kubo noma abanye abalamuli abanjengezimpimpi noma abashayeli bamatekisi “abaziyo indawo”. Uma ubanjiwe futhi isifebe singasashayi mkhuba noma siye sakhashelwa noma saphoqelelwa (futhi njengaseNtshonalanga Yurophu, abaningi babo) uzothweswa icala lobugebengu obuhlobene nokushushumbiswa kwabantu kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi. Amathuba ongabanjwa akhuphuka uma ungowakwamanye amazwe njengoba izimbangi zezimbangi zizokwazisa ngomqhudelwano wazo futhi owakwamanye amazwe kuyinto “ekahle” efanelekile. Imithetho efanayo isebenza ezingubeni eziningi ezivusa inkanuko ezivulwe eminyakeni yamuva nje futhi ezihlala manje indawo engokomthetho engwevu.
Qaphela ukuthi njengoba iRomania inelinye lamanani aphansi kakhulu okufika kwabantu eYurophu, abantu baseRomania, ikakhulukazi ngaphandle kwamadolobha amakhulu, abajwayele ukubona abantu bezinhlanga ezihlukile. Ukuhlangenwe nakho kwakho kungahluka, kube ngcono noma kubi, kepha okungenani ungalindela ukubonwa okungathandeki.
Izinombolo zocingo eziphuthumayo
I-Romania isebenzisa inombolo ejwayelekile ye-pan-European 112 kuzo zonke izingcingo eziphuthumayo kusukela ngo-December 2004. Ngakho-ke, le yinombolo kuphela oyodinga ukuyikhumbula ngamaphoyisa, i-ambulensi kanye nomnyango wezomlilo.
IRomania iphephe impela, inobugebengu obunobudlova obuncane. Amaphakethe okukhokha kanye nemikhonyovu (njengemikhonyovu yamatekisi noma amaqhinga wokuzethemba) akhona ngezinga elibanzi, ngakho-ke zinakekele kakhulu izindawo ezindaweni ezinabantu abaningi njengeziteshini zikaloliwe, izimakethe nokuhamba komphakathi emadolobheni. Gcina imali noma izinto zakho ezibalulekile emaphaketheni angaphakathi esikhwameni sakho futhi njalo ubuke isikhwama sakho sezindawo ezindaweni ezinabantu abaningi.
Abantu baseRomania banomoya wokungenisa izihambi. Emaphandleni namadolobhana amancane, bamukela izivakashi zakwamanye amazwe futhi, ngezikhathi ezithile, bangase bakumemele nesidlo sasemini. Njengoba kujwayelekile komakhelwane baseBalkan baseRomania, abantu baseRomania bayophikelela lapho benikela ngokuthile, ngoba “cha” kwesinye isikhathi akusho ukuthi “cha,” futhi bakubheka njengokukuhle nje ukwenqaba kwakho futhi ubenzela inhlonipho yokuba baphikelele.
Kufanele uthathe ezinye izinyathelo ezijwayelekile zokufunda kuqala umgcini wakho. Kujwayelekile ukuba abangane nomndeni baqabule izihlathi zombili lapho bevalelisa noma behlukana. Ukuhlonipha abantu asebekhulile kuyaziswa kakhulu futhi kuyisibonakaliso esihle somuntu wakho. Imishwana esetshenziselwe ukubingelela abangane kanye nabantu ongabazi ngokufanayo ithi "Bună ziua" (Boo-nah Zee-wah) okusho ukuthi "ntambama enhle" noma "usuku oluhle."
Emabhishi, abesilisa bagqoka ama-speedos noma ama-shorts, kanye nalawo ayevame kakhulu phakathi kwama-40s ngaphezulu, futhi owokugcina adume kakhulu ngesixuku esincane. Abesifazane bathambekele ekugqokeni i-thong bikinis, ukushiswa yilanga okungenamkhawulo sekuya ngokuya kuthandwa kakhulu kepha akubona bonke amabhishi abemukela lo mkhuba ngakho-ke kungcono ukubheka kuqala abanye besifazane abakwenzayo.
Ukugqoka okulondolozayo kumele kugqokwe ezindaweni zezenkolo. Ama-shorts anqatshelwe futhi abesifazane kufanele bavame ukumboza amakhanda abo ngaphakathi kwezindela namasonto.
Yenqaba ukubonwa, kungaba ngokungazi noma ukunganaki, ukuthi isiRomania siwulimi lwesiSlavic noma noma sihlobene nesiHungary, isiTurkey noma isi-Albanian. Ulimi lweRomance (olugxilwe esiLatini) futhi luhlobene nesiNtaliyane, iSpanishi, isiFulentshi nesiPutukezi. Uma ulimi lwakho lwendabuko lungolunye lwalezi zilimi eshiwo ngenhla uzokuthola kulula kakhulu ukukhetha amagama ambalwa ngendlela. Abantu baseRomania bayabazisa nabangaphandle abangacabangi ukuthi iRomania yayiyingxenye yoMbuso WaseRussia noma weSoviet Union (yamanga yize yayiyilungu le-Eastern Bloc).
Abantu baseRomania abayithandi iRomania ukuthi ibizwe njengezwe laseBalkan ngenxa yesithombe esingesihle sale ndawo.
Ayilungile ngokuphelele ngokwendawo noma iningi leRomania (uma kukhawulelwe eDobrogea, Moldavia, Muntenia nase-Oltenia, noma iningi leRomania) ingaphandle kweBalkan.
Izingcingo eziphathwayo zigcwele ukuqaphela eRomania. Kukhona amanethiwekhi amane we-2G GSM / 3G WCDMA / 4G (I-Orange, Vodafone, Telekom neDigi.Mobil). I-Orange, i-Vodafone ne-Telekom banokuhlanganiswa okugcwele ezweni lonke (i-98-99% yabantu bezwe), kanti iDigi.Mobil isanda ngokushesha.
Ungathola i-SIM ekhokhelwa kuqala ngenombolo yocingo yaseRomania engaphansi kwama-10 Euro cishe kunoma yisiphi isitolo noma esitolo. Ngokungafani namanye amazwe amaningi ayikho i-ID edingekayo ekhadini elikhokhelwe kuqala kanti nezinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili zivame ukushibhile (isb. 50GB dataplan ye 5 euros / 30days). Yazi ukuthi isikweletu esikhokhelwa ngaphambili kufoni yakho siyovezwa njalo nge-Euro noma ngabe ukukhokha kuzohlala kwenziwa ngemali yendawo.
Ukufinyelela i-Intanethi kushesha, kutholakala kabanzi ezindaweni zasemadolobheni futhi kuyakhula ezindaweni zasemakhaya.
Amakhekhe e-Intanethi manje awatholakali ndawo ngaphandle kwamadolobha amakhulu lapho kungenzeka kwasinda eyodwa noma amabili. Amakhompyutha ngokuvamile awatholakali emitapweni yolwazi noma ezindaweni zomphakathi njengeziteshini zezitimela.
Ukufinyelela okungenantambo kuyakhula, ikakhulukazi IBucharest, Brasov, ISibiu, iBistriţa, iTimişoara neCluj ene-Wi-Fi etholakala kabanzi ezindaweni zaseNyuvesi, isikhumulo sezindiza, amabala omphakathi, amapaki, amathofi, amahhotela nezindawo zokudlela. I-Wi-Fi ekhokhelwe ngisho ne-free iyatholakala ezindaweni eziningi. Uma ungaqinisekile, funa izigcawu eziseduzane neHholo Ledolobha, amapaki amakhulu noma ezinye izakhiwo ezibalulekile. Izindawo zokudlela eziningi (uma kungezona zonke) eziseRomania zinokufinyelela kwe-Wi-fi kanjalo namahhotela amaningi ezinkanyezi we-3-and (ephakeme). Qaphela futhi ukuthi amadolobha amaningi amancane futhi anama-WIFI amahhala ekhwalithi ehlukahlukene kulo lonke umkhawulo wedolobha;
I-Intanethi yeselula itholakala ngentengo ephansi yizo zonke izinkampani ezingamaselula.
Imizana enamasonto aBiyelwe eTransylvania
Izinqaba zaseDacian zezintaba ze-Orastie
Isikhungo Somlando Sighişoara
Amasonto Wokhuni weMaramureş